कहाँबाट कसरी जाने रारा ? कति खर्च लाग्छ ? « Clickmandu
काठमाडौं । तपाईंहाामी कोरोनाका कारण झन्डै एक वर्ष थुनिएर बस्यौं । त्यसैले नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा तपाईंले कतै घुम्न निस्कने सोच बनाउनु भएको हुनसक्छ । यदि रिफ्रेस हुनका लागि कतै घुम्न निस्कने सोचमा हुनुहुन्छ भने रारा तपाईंका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ ।
त्यसैले आज हामी तपाईंलाई कसरी रारा तालबारे विशेष जानकारी गराउँदैछौं ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र प्रसिद्ध ताल हो रारा । मुगु जिल्लामा रहेको रारालाई राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२० सालमा स्वर्गकी अप्सरा भनेर नामकरण गरेका थिए ।
रारा तालको लम्बाई ३.२ किलोमिटर र गहिरा १ सय ६७ मिटर छ भने लम्बाइ १०.८ किलोमिटर छ ।
तर, रारा तालले लागि विदेशी पर्यटकको खासै मन तान्न सकेको छैन । आन्तरिक पर्यटकले पनि सिजनको बेला सहजै बास पाउने अवस्था छैन ।
रारा तालको छेउमै डाँफे होटललगायत २/३ वटा मात्रै बास बस्ने ठाउँ छ । भएका होटलमा पनि प्रसस्त मात्रामा रुम छैनन् ।
होटलले आएका पाउनालाई पाल टाँगरे राख्ने गर्छ । रारा ताल जानको लागि हवाई तथा स्थल मार्ग दुबै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यही तालको पुरा आकृती हेर्नको लागि समुन्द्री सतहबाट करीब ४ हजार मिटर उचाईमा रहेको मुर्मा टप नै उपयुक्त स्थल हो ।
घामको किरणअनुसार राराले आफ्नो कलर फेर्ने गर्दछ । नेपालको सबै भन्दा ठूलो रारा तालमा जति बाह्य पर्यटकका आगमन हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । तर स्वदेशी पर्यटकको भने उल्लेखनीयरुपमा आगमन हुने गरेको छ ।
तर, अहिले रारा जान १० दिन हिड्नु पर्ने बाध्यता छैन । सार्वजनिक सवारीमा जानेका लागि काठमाडौंबाट दैनिक कर्णाली यातायातको बस जुम्लासम्म जाँन्छ ।
काठमाडौंबाट हिडेको करिब ३० देखि ३२ घन्टामा बसबाट जुम्ला सदरमुकाम खलंगा पुग्न सकिन्छ । जुम्लासदरमुकामबाट भने लोकल बस राराका लागि छुट्दैन । सवारीमै जानेहरुले साना गाडी रिर्जव गर्नुपर्छ । तर, खलंगबाट सिन्जा उपत्याका हुँदै मुगु सदरमुकाम गमगडी जाने बस पाइन्छ । गमगडीबाट हिँडेर ४/५ घन्टामा रारा पुग्न सकिन्छ ।
खलंगाबाट जान आउनका लागि गाडीले २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । तर, जुम्लाबाट हिँडेर नै रारा जानका लागि दुई दिन लाग्छ । यसबाहे पनि नेपालगञ्ज तथा सुर्खेतको विरेन्द्र नगरबाट पनि गाडी रिर्जब गरेर रारा ताल पुग्न सकिन्छ ।
खालीचौरबाट बिस्तारै हिड्दै हिड्दै काभ्रा पुग्न सकिन्छ । काभ्रामा पडाडको डिस्कामा खोपिएको स-सना पुरानै शैलीका घरहरु हेर्न पाइन्छ । त्यहाँबाट एक घन्टाको पैदल यात्रापछि जुम्लाको चौथा भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ । त्यहाँबाट पनि एक घन्टाको उकालो हिडेर जुम्लाकै भुलभुले पुगिन्छ । भुलभुलमा भने सवारी आवतजाव पनि राम्रै छ ।
रारा छेउमै पुग्दा पनि अझै ‘कस्तो होला रारा ताल रु ’ मनमा कौतुहलता चलिनै रहेको हुन्छ । सल्लाघारीको बीचबाट विशाल गोरेटो छ । जंगलभित्र छिर्न कठिन हुने बुट्टयानहरूका साथमा रूखका हाँगाहाँगासम्म फैलिएका सुकेका लेउहरू । झाडीका बीचमा आउने झ्याइँकिरीको आवाजसँगै जंगली संगीतले साउती गर्दछ । झन्डै ३० मिनेट पैदल हिँडेपछि एउटा नसोचेको दिव्य संसार आउँछ । त्यही हो रारा । त्यसमा पनि राराले फेर्ने विभिन्न रुपले पनि सबैको मन तानेको हुन्छ ।
रारा घुम्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने खर्च धेरै हुने गन्तव्यको रुपमा नलिदा हुन्छ । रारा जानका लागि सबैभन्दा सस्तो रुट छनौट गर्ने हो भने १८/१९ हजारमै रारा पुगेर काठमाडौं आउन सकिन्छ ।
काठमाडौंबाट २८ सय रुपैयाँ बस भाडा लाग्छ । बाटोमा खाजा खानाका लागि एक हजार भए पुग्छ । जूम्ला सदरमुकाम बसाइका लागि एक हजार रुपैयाँका खाना सहित बास पाइन्छ । त्यहाँबाट रारातालसम्म हिडेर दुई दिनमा पुग्नका लागि तीन हजार रुपैयाँ भए पुग्छ ।
रारा तालका घोडा चढ्नदेखि एक रातको बसाइ र खानामा दुई हजारले पुग्छ । फेरि सोही रुटमा पर्कदा करिब १८/१९ हजारमा काठमाडौ आइपुगिन्छ । होइन म फर्कदा हवाई यात्रा गर्छु भनेपनि कुनै बढी रकम लाग्दैन । किनकि ताल्चाबाट नेपालगञ्जको राजा विमानस्थल ४ हजारदेखि ४५ सय रुपैयाँमै आउन सकिन्छ । नेपालगन्जमा दूई हजारमा एक रात मज्जाले बिताएर काठमाडौं आइपुग्दा पनि २० हजार भन्दा बढी खर्च हुँदैन ।
तर, नेपालगज्ज तथा सुर्खेत वा जुम्ला सदरमुकाम खलंगाबाट गाडी रिजर्भ गरेर जाँदा भने ३/४ हजार रुपैयाँसम्म बढी लाग्नसक्छ ।
उपयुक्त समय कहिले ?
ताल्चा-नेपालगन्ज उडान भर्ने जहाजले राराको फन्को लगाइदिन्छ । जसका कारण अवलोकनकर्ताले आकाशबाट पनि तालको मनोरम दृष्य कैद गर्न सक्छन् । आकाशबाट हेर्दा उपत्यका जस्तो लाग्ने राराको रंग गाढा निलो देखिन्छ । जेठदेखि आसोजसम्मको मौसममा बिभिन्न फूलहरू पहिरिएर स्वर्गकी अस्सरा झैं देखिने रारा तालको शोभा रारा निकुन्जमा पाइने कस्तुरी, रतुवा, डाँफेले बढाइदिएको छ ।